मर्नुभन्दा पहिला बाँच्नु पर्छ | Nagarik News - Nepal Republic Media
मर्नुभन्दा पहिला बाँच्नु पर्छ
२८ वैशाख २०७७ २१ मिनेट पाठ
मलाई बाँच्छु भन्ने थिएन । न्युयोर्कमा यस्तो अवस्था भइसकेको थियो, कोरोनाले भेटेमध्ये धेरै कम मात्र बाँचिरहेका थिए । हरेक दिन जुन प्रकारले बिरामीहरूको संख्या थपिँदै थियो त्यसले यस्तो लाग्न थालेको थियो यो नै मानवसभ्यताको अन्तिम समय हो ।
नर्स भनेको युद्ध मैदानमा सबैभन्दा अगाडि उभिने सैनिकजस्तै हो । शत्रुका बन्दुकबाट छुटेको पहिलो गोली थाप्न उभिएको छातीजस्तै हो हामी नर्सहरूको जागिर । यसलाई हामीले जागिरको रूपमा लिएका पनि हुँदैनौं । यो पढ्दै पनि केवल जागिर सोचेर पढिएको हुँदैन । सेवाको भावनाले नै हामी परिचालित हुन्छौं । जब सेता गाउन लगाएर म बिरामीका अघि पुग्थेँ र उनीहरूले आशाको नजरले हेर्थे मलाई मेरो कर्ममाथि गर्व लाग्थ्यो ।
मैले सोचेँ–‘ म जे गरिरहेकी छु, यो काम त जसले पनि गर्न सक्छ । म नरहे पनि यो पेसा रहिरहन्छ र यो काम गर्ने नर्सहरू पनि भई नै रहन्छन् । म मात्र सँधै रहन्न र मैले चाहेको कुरा मबाहेक अरू कसैले पूरा गरिदिदैनन् पनि । बाँच्नु भनेको सास फेरिरहनु होइन । आफू हुनुको अर्थ सहित बाँच्नु पो बाँच्नु हो ।’
मैले यो बाहेक अरू नै विषय पढेर अरू नै काम पनि गर्न सक्थेँ । अमेरिकामा काम पाउन र पैसा कमाउन एउटै पेसामा सधैँ अड्किरहनु पर्दैन । तर मलाई सानैदेखिको रुचि नै यही थियो । मैले यो विषय रोजेकोमा मेरी आमा पनि मसँग खुसी भएकी थिइन् । उनले बेलाबेला फोन गरेर मलाई सम्झाइ रहन्थिन्–‘दयालु हुनु ! सहयोगी हुनु ।’
हरेक दिन अनेकौं फरक–फरक रोगले सताइएका मानिससँग भेट हुन्थ्यो र उनीहरूका पीडा र निराशाहरू सुन्नु पथ्र्यो । नियमित अपोइन्टमेन्टमा आउनेहरू आउँदा आउँदै आउनै छोड्थे । कसैको बारेमा तत्काल, कसैको बारेमा धेरैपछि थाहा पाइन्थ्यो बितिसकेको ।
म जब एक्लो अनुभव गर्थें हरेक शनिबार आमाबाबुको चिहानमा गएर फूल चढाउँथेँ, प्रार्थना गर्थेँ र दुई थोपा आँसु पुछेर फकिन्थेँ । त्यसबेला लाग्थ्यो मैले आमाबाबुलाई जिउँदै भेटेकी छु । अनि नयाँ आँट र जोशका साथ काममा जुट्थेँ ।
प्रशस्त कमाइ नभए पनि एकजनालाई पुग्दो थियो । जीवनमा धेरै ठूला सपना पनि थिएनन् । छोरी मान्छेको रहर सन्तानकी आमा बन्ने हुन्छ नै । मैले पनि त्यो रहर पालेकै थिएँ तर, मेरा दुवै केटासाथीहरूले मलाई त्यो रहर पूरा गर्न सहयोग गरेनन् । मलाई सिङ्गल मदर हुन मन थिएन । बाबुको मायाविनाका बच्चाको मन कस्तो हुन्छ भन्ने मलाई अनुभव भएकाले म एउटा व्यवस्थित वैवाहिक जीवन चाहन्थेँ । तर मैलेजस्तो वैवाहिक जिम्मेवारीमा पस्न उनीहरूले मन गरेनन् । उनीहरू भन्थे, बच्चा नभए पनि हुन्छ वा चाहिए पनि चालीस पचास वर्षको उमेर पुगेपछि आरामले बनाउने । उनीहरूले त पचास वर्षपछि पनि कुनै पच्चिस वर्षकी केटीलाई पेट बोकाउन सक्थे तर म पचास वर्षपछि गर्भवती हुन कहाँ सक्थेँ !
मैले मन नहुँदा नहुँदै पनि उनीहरूबाट आफूलाई अलग गरेँ । त्यसपछि पनि मलाई सिंगल होस् ? भनेर सोध्नेहरू धेरै आए तर अब मलाई केटाहरूबाट विश्वास उठ्न लागेको थियो । उनीहरू केवल शरीरको भोग गर्नका लागि मात्र नजिक आउन चाहन्थे ।
मलाई थाहा छ पुरुषको सहयोगविना आमा बन्न सकिँदैन । कुनै महिला आमा नहुने हो भने यो संसारको निरन्तरता रहँदैन । तर पुरुषहरू किन त्यस्ता गैर जिम्मेवार बन्छन् ? किन उनीहरूलाई महिलालाई जति सन्तानको रहर लाग्दैन ?
प्रजनन् अवधिको निश्चितता महिलाका भावनात्मक कमजोरी हुन् जसलाई पुरुषहरूले दुरुपयोग गरिरहन्छन् । जब म पैँतीस वर्षकी थिएँ, एकपल्ट मलाई कुमारी आमा हुन मन लागेर आयो तर त्यसका लागि मसँग दुईटा सर्त थिए–कि त त्यो बच्चा कुनै मेरो अत्यन्त प्रिय केटा साथीको होस्, कि त त्यस्तो मान्छेको होस् जो धेरै प्रतिष्ठित र परिपक्व होस् । यी दुवै कुरा सजिला थिएनन् । म केवल शरीर सुखको प्रतिफलको रूपमा फुत्त जन्मिएको बच्चाको आमा बन्न इच्छुक थिइनँ । मेरो त्यस्तो इच्छा पूरा गरिदिने मानिस पनि भेटिएन ।
जब चालीस वर्षकी भएँ, मैल त्यो सोचाइलाई स्थगित गरिदिएँ । अनि अध्यात्मको अध्ययनतिर लागेँ । मलाई मेरी आमाले बालककालदेखि नै पवित्र बाइबलका कथाहरूले दीक्षित गराएकी थिइन् तर किन हो त्यसले मात्र मलाई पुगेजस्तो लागेको थिएन ।
यस्तै बेलामा एकपल्ट एउटा भारतीय युवक मेरो डाक्टरसँगको अपोइन्टमेन्टमा आयो । मलाई त्यसको अनुहारको आभाले अचम्म प्रकारले आकर्षित ग¥यो । बाहिरबाट हेर्दा त्यो खासै रोगी जस्तो थिएन तर ऊ बिस्तारै गम्भीर रोगको सिकार हुन लागेको थियो । उसलाई आफ्नो रोगको बारेमा सबै कुरा थाहा भएर पनि पटक्कै पिर गरेको थिएन । मैले मेरो पन्ध्र वर्षको नर्स जीवनमा यस्तो तनावहीन रोगी भेटेकी थिइनँ । त्यही भएर पनि म ऊतिर आकर्षित भएथेँ होला । तर ऊप्रति भएको त्यो आकर्षण मेरा पुराना केटासाथीसँगको जस्तो थिएन ।
तेस्रोपल्टको अपोइन्टमेन्टमा आएपछि मैले ऊसँग विशेष रुचि लिएर उसको फोन नम्बर मागेँ । मलाई उसको त्यो व्यक्तित्व मेरो आमा बन्ने दोस्रो विकल्पको व्यक्ति हुनसक्छ जस्तो पनि लाग्न थालेको थियो । मैले ऊसँग निरन्तर सम्पर्क गर्न लागेँ । ऊ हरेकपल्ट सहजरूपमा संवादमा आउँथ्यो । उसका कुराहरू सधैँ फरक शैलीका लाग्थे । जीवनका बारेमा उसका सोचाइ र धारणाहरू एकदम नै सरल र सामान्य थिए । उसमा हतार, तनाव र उच्च लक्ष्यहरू केही थिएनन् । जब ऊ बोल्न थाल्थ्यो, ऊ यो दुनियाँको कुरा गरिरहेजस्तो लाग्दैन थियो ।
जतिजति मलाई उसको चासो बढ्दै गयो उतिउति उसको रोगको चिन्ता मलाई पनि सर्न थाल्यो । त्यस्तो राम्रो मान्छेलाई किन लागेको होला त्यति नराम्रो रोग । उसले मलाई हरेकपल्ट भेट्न समय दिन्थ्यो । तर हामी बीचमा कहिल्यै प्रेमजस्ता कुरा भएनन् । यौनजन्य प्रेमको प्रसङ्ग नहुँदा पनि पुरुष र स्त्रीको बीचमा मित्रताजस्तो बेग्लै सम्बन्ध पनि हुन सक्दो रहेछ भन्ने उसकै संगतबाट मैले बुझेकी हुँ ।
एकदिन मैले उसलाई पाँच वर्षअघि मलाई आमा हुन मन लागेको र त्यसका लागि रोजेका पुरुषबारे कुरा सुनाएँ । उसले त्यसलाई एकदमै सरल ढंगबाट लियो र संस्कृत साहित्यको महान ग्रन्थको बारेमा निकै दिनसम्म पढायो । उसले भन्या, यो ग्रन्थभित्र मानिसका सबै प्रश्नहरूको उत्तर छ । तिमी यो पढ ।’ भनेर मलाई एउटा अंग्रेजीमा अनुदित महाभारत नामको किताब दियो । निकै दिन लगाएर मैले त्यो पढेँ । वास्तवमा त्यहाँ मेरा धेरै प्रश्नहरूका उत्तर थिए । त्यसमा थियो कुन्तीले आमा बन्नका लागि मनले रोजेका पुरुषहरूबाट वीर्य लिएर सन्तान जन्माएको कथा । त्यो किताब पढेपछि मलाई मेरो जीवनभित्रका सबै अन्योलहरूको अन्त्य भएजस्तो लाग्यो ।’
एकदिन उसले भन्यो– ‘तिमीले संस्कृत भाषामै पढ्न सक्ने हो भने झन् धेरै रमाउन सक्ने थियौ । उसले मभित्र अनौठो जिज्ञासा भरी दियो । एकाएक म अर्कै संसारमा प्रवेश गर्न लागेकी थिएँ । तर दुःखको कुरा त्यो युवक धेरै बाँचेन । ब्लड क्यान्सर अरू क्यान्सरजस्तो नभए पनि उसले त्यसको औषधिलाई पचाउन सकेन । मर्नुभन्दा केही दिन अघि उसले भनेको थियो, सबै काम सकेर कोही पनि मर्दैन, त्यसैले जहिले मरे पनि केही फरक पर्दैन ।’
मलाई उसको त्यो भनाइ एकदम नै घत लागेको थियो । त्यही दिन मैले सोचेँ–‘ म जे गरिरहेकी छु, यो काम त जसले पनि गर्न सक्छ । म नरहे पनि यो पेसा रहिरहन्छ र यो काम गर्ने नर्सहरू पनि भई नै रहन्छन् । म मात्र सँधै रहन्न र मैले चाहेको कुरा मबाहेक अरू कसैले पूरा गरिदिदैनन् पनि । बाँच्नु भनेको सास फेरिरहनु होइन । आफू हुनुको अर्थ सहित बाँच्नु पो बाँच्नु हो ।’
उसको फेनरलको भोलिपल्टै मैले काम छोडेँ र भारत भ्रमणका लागि हवाई टिकट काटेँ । अन्तिममा उसले एउटा अर्को किताब पनि दिएको थियो– ‘एन अटोवायोग्राफी अफ योगी’ । त्यो किताबले त मलाई झन रुमानी बनाइ दिएको थियो । कल्पनालोकको अर्कै संसारमा पौडिन लागेँ । त्यसपछि पटक–पटक तीन वर्षसम्म भारत, नेपाल र श्रीलङ्काका अनेकौँ धार्मिकस्थलहरू घुमेँ । यी कुरा मैले तिमीलाई पहिले नै भनिसकेकै थिएँ । हरिद्वारका गुरुकुलहरूमा घुमीघुमी संस्कृत भाषा सिकेँ र सिधै संस्कृतमा उपनिषद्हरू पढ्न थालेँ ।
आफैँभित्र आनन्दको ज्योति बलेजस्तो लाग्न थालेको थियो । मलाई यसै पनि बाँध्ने कुराहरू त्यस्ता केही थिएनन् । मैले अठार वर्षदेखि काम गरेर जोगाएको पैसा यो तीन वर्षमा सबै खर्च गरिसकेकी थिएँ । अब फेरि म काममा फर्किनु पर्ने भो । अनि मैले आफूलाई आफ्नै पेशामा फर्काएँ । अब मलाई पहिलेको जस्तो हतार, तनाव, लोभ, डर, शङ्का केही पनि थिएन । जब मैले गीता पढेँ, मलाई आफ्नो उपस्थितिका विशेष अर्थ लाग्यो । अब मैले कर्म र कर्मका भेदहरू बुझेकी थिएँ ।
मलाई आफैँभित्र आनन्दको ज्योति बलेजस्तो लाग्न थाल्यो । व्यक्तिगत र पारिवारिक कुनै जिम्मेवारीहरू थिएनन् । मैले कमाएर कसैका लागि थुपार्नु पनि थिएन । मेरो जन्म र मृत्यु कसैको निमित्त पनि त्यति खास कुरा होइन रहेछ भन्ने बुझेको दिन नै मैले आफूलाई एक प्रकारले लोभ, डर र घृणाबाट मुक्त गरेकी थिएँ ।
त्यसपछि मलाई झन् धेरै मेरो पेशाप्रति आस्था बढेर आयो । सबैभन्दा निःस्वार्थ सेवा भनेकै असक्त, कमजोर र रोगीको सेवा गर्नु हो । यिनै कुरा मैले बाइबलमा पनि पढिसकेकै थिएँ । म अब कुनै खास धर्महरूबाट माथि उडेकी थिएँ र यो संसारलाई प्रकृतिको सुन्दर बगैँचा देख्न थालेकी थिएँ ।
मलाई मर्नुसँग कुनै डर थिएन । किनकि संसारमा नमर्ने कुनै कुरा थिएन । मेरो महत्व म भएसम्मको मात्र हो । म छैन भनेकै क्षणदेखि मेरो हुनुलाई समेत सबैले बिर्सिसकेका हुनेछन् । त्यसैले यो संसारमा बाँच्ने भनेको आफैंँले हो र त्यो केवल आफ्ना लागि मात्र हो तर आफू बाँच्नका लागि अर्कालाई बाँच्न अवरोध पु¥याउन होइन । म मरेका दिन पनि आकाशका ताराहरू, पृथ्वीका बोट, वनस्पति, जीवजन्तु सबै हुनेछन् र आफ्ना नाताकाहरू पनि त्यत्तिकै हुनेछन् । हाम्रो लाशलाई विद्युत शवदाहगृहभित्र पठाएर फर्किने बित्तिकै उनीहरू घरमा आएर वियर पिउँदै एकछिन मेरो निम्ति रुँदै प्रार्थना गर्ने छन् र त्यही क्षण उनीहरूले सदाकालका लागि बिर्सिसक्ने छन् ।
मैले बुझेको यही सत्यलाई हर्मन हेसको सिद्धार्थ भन्ने उपन्यासले पनि पुष्टि गरेको थियो । अनि म कुनै तनाव र कौतुहलताविनाको जीवन बाँच्न थालेकी थिएँ ।
तर जब यो कोरोना १९ को आतंक फैलियो, सहजकालमा मेरो बुद्धिमा पसेका ज्ञानका सबै कुरा स्थगित भए । म आफैँ छक्क परेँ, कसरी मभित्र जीवनको यस्तो मोह पलाएर आयो ? मलाई किन यति धेरै बाँच्न मन लाग्यो ?
यो यति भयानक होला भन्ने सुरुमा कसैले पनि सोचेको थिएन । अस्पतालमा आउनेहरूलार्ई पनि सामान्य प्रकारले नै उपचार गर्दै थियौँ तर एकाएक यो यस्तो आक्रामक भएर देखापर्न थाल्यो, हाम्रा सबै उपचार प्रविधिहरू किनारा लागे । मलाई मात्र हैन, संसारकै कुनै मानिसलाई पनि अमेरिका आकस्मिक उपचार पद्धतिकालाई यति धेरै अव्यवस्थित होला भन्ने लागेको थिएन । अमेरिकाले हरेक कुरामा संसारलाई दिएको सक्षमताको सूचना एकाएक धरासयी भएको थियो । हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूके लागि अत्यावश्यक प्रतिरक्षात्मक सामग्रीहरू पनि थिएनन् । नभन्दै एकदिन अचानक म ढलेँ । म ढलिसकेको पाँचौँ दिन मैले मेसेञ्जरमा तिमीसँग बोलेर केही कुरा गरेकी थिएँ । त्यसबेला मलाई आफू बाँच्छु होला भन्ने लागेकै थिएन ।
त्यसबेला म आश्चर्यचकित भएकी थिएँ, जब अमेरिकाले एउटा सामान्य भाइरससँग हारेको थियो र हजारौँजना मृत्युको मुखमा जाँदै थिए । अमेरिकाले संसारभरि हतियारको भरमा गरेको शासन, अमेरिकी डलरले संसारभरि गरेको व्यापार र नासाले गरेको अन्तरिक्षको विजय सबैले एकै चोटी घुँडा टेकेको थियो । सन् २०१९ मार्च चौधमा जब अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले पहिलोपल्ट पचपन्न लाख मिलियन प्रकाश वर्ष टाढाको : ग्यालेक्सीको केन्द्रको ब्ल्याक होलको फोटो खिचेर सार्वजनिक गरेको थियो, त्यो दिन मैले कृष्णले विराट स्वरुपमा मुख बाएर ब्रह्माण्डमा भएका सबै चिजलाई निलिरहेको दृश्यलाई बुझेकी थिएँ । त्यो दिन लागेको थियो विज्ञान अध्यात्मको नजिक पुग्न लागेको छ । तर जब तमाम औषधि विज्ञानले हात उठायो, अन्तरिक्षको मानवयात्राको अभियान एउटा जीवाणुको विषभन्दा कमजोर रहेछ ।
मैले आफूलाई फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको अवतारको रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा थाहै भएन कतिखेर, कसबाट मैले कोरोना उपहार पाएँ । मलाई थाहा थियो, यो रोग लागेपछि अस्पतालमा बस्नु भनेको छटपटाउँदै मर्नु मात्र हो । अनि आफैँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेर जीवन वा मृत्युमध्ये एकको प्रतिक्षामा थिएँ । जुन दिन मेरो तिमीसँग कुरा भयो, त्यसको भोलिपल्ट बिहान दशतला माथि रहेको मेरो अपार्टमेन्टकै छिमेकी कोठाको झ्यालबाट एउटा विद्यार्थी युवकले हाम फालेर शरीरत्याग गरेको थियो ।
ऊ कोठामा एक्लै बस्थ्यो । अत्यन्त भलाद्मी थियो । कम बोल्थ्यो । आइटीको विद्यार्थी थियो । तर उसले आत्मबल कमजोर बनायो । मृत्युको डरले मर्नुभन्दा पहिल्यै मर्‍यो । मर्नुभन्दा पनि मर्ने डर ठूलो रैछ । तर मैले आफ्नालाई हरेक क्षण बाँच्नु पर्छ भनिरहेँ । अर्धचेतमा पनि मेरो मनमा एउटै कुरा थियो–‘म छिट्टै जाती हुन्छु । मैले यो रोगलाई जित्छु ।’
आज म फेरि बाँचेको खबर तिमीलाई इमेलबाट दिइरहेछु । अब तिमी ढुक्क हुनु । म तिमीले दिएको कलमबाटै एउटा किताब लेख्नेछु, यही जीवन र मृत्युबीचको अनुभूति । त्यसको पहिलो पाठक पनि तिमी नै हुने छौ । बाँकी पछि ।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७७ ११:०६ आइतबार
न्युयोर्क मानवसभ्यता समय खुसी नागरिक परिवार
थमन परियारको स्मृति सभामा अधिकारीले भनेः सिद्धिने कि सुध्रिने?
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हरिराज अधिकारी (कुमार)ले २०६४ सालकै अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउन सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति लाग्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रदेश १ मा १ सय ८ जनामा कोरोना संक्रमण
प्रदेश १ मा पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ८ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। २ सय ९९ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ८३ र १ सय ६३ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २५ जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।